Ny tsiro rehetra amin'ny Design Material amin'ny Nova Launcher 4.0 | Androidsis
Nova Launcher dia izao no mpandefa fampiharana mahomby indrindra. Efa afaka mahita vaovao iray izay mampifaly antsika amin'ny fomba hafa ahazoana mampiasa rindrambaiko toy ny Action Launcher na iray hafa te-hiasa amin'ny alàlan'ny fanovana ny birao arakaraka ny ora na ny toerana misy antsika, izay amin'ny farany dia maro amintsika no mifarana manapa-kevitra ny hiverina any Nova Launcher.
Ary mety noho ny azy izany fahaiza-manao ambony, safidy hendry amin'ny sary mihetsika sasany tsy misy fanarabiana be ary ho fanatsarana tsara miasa toy ny manintona amin'ny fitaovana marobe nefa tsy mila miahiahy momba ny tara ny mpampiasa. Ary raha efa manakaiky ny fahalavorariana izy io, amin'ny famoahana ny kinova 4.0, izay miaraka amin'ny Material Design na aiza na aiza, dia manome antsika ny tsara indrindra azo zahana amin'izao fotoana izao ho toy ny mpandefa quasi-tonga lafatra. Mampianatra antsika i Nova fa ny fampiharana dia matetika mihoatra ny originality sy ny famoronana amin'ny fampiharana iray.
1 Famolavolana fitaovana maloto amin'ny lafiny rehetra
2 Nova Launcher 4.0 sy ny fiovana ao aminy
Famolavolana fitaovana maloto amin'ny lafiny rehetra
Ka aorian'ny a tsara isan'ny fanavaozana nanomboka dia natomboka tamin'ny volana martsa, efa Miaraka amintsika ny kinova farany 4.0 sy maharitra an'ny Nova Launcher ary izany dia miomana hitondra ny tsara indrindra amin'ny Material Design amin'ny fitaovana Android.
Amin'ny ankapobeny, ny zoron'ity mpandefa ity dia nahazo endrika Material Design, izay midika fa miatrika mpandefa iray izay mirehareha ny maodely nofaritan'i Google hatramin'ny nanambarana Android Lollipop efa ho herintaona lasa izay. Fomba fahita iray izay efa hitantsika tamin'ny rindranasa malaza marobe toa ny WhatsApp mihitsy izay nilefitra ary nitondra ireo loko fisaka sy sary mihetsika liana te hahafantatra.
Nova Launcher 4.0 sy ny fiovana ao aminy
Inona no atrehantsika fampiharana havaozina amin'ny resaka famolavolana, Tsy midika izany fa very ampahany amin'ny fampiasa izay nahatonga azy io ho iray amin'ireo mpandefa mpandeha tsara indrindra. Ary mba hahatakarana bebe kokoa ny vava tsirairay izay "nandokoana" azy tamin'ny Material Design dia ireto ny pitsopitsony.
Fitaovana famolavolana material ao: ny toerana sy ny dinika rehetra, miampy ny sarimiaina, ny fanovana ny hitsin-dàlana hitsin-dàlana mifototra amin'ny loko kisary, ary ireo vaovao vitsivitsy
Miorina amin'ny inona ilay Launcher 3
Fikirana manokana ho an'ny kisary (habe, endritsoratra sns.) Eo amin'ny birao, vatasarihana fampiharana, sns.
Ny haben'ny kisary indrindra amin'ny 150%
Swipe midina hanombohana ny fikarohana
Sariitera vaovao ho an'ny widget
Fanohanana Android for Work (lollipop)
Anisan'ireo vaovao marobe voaray Sarimiaina izay miseho rehefa mikisaka midina handefa ny fikarohana Google na Google Now dia miavaka be, ary inona izany hoe afaka manova azy io amin'ny fotoana tena izy avy eo amin'ny toe-javatra, hahitana ny fiovan'ny sary mihetsika eo anelanelan'ny birao na ny fihetsiky ny vatasarihana fampiharana.
Raha fintinina, Ny Nova Launcher dia mampitombo ny kalitaony ary mitondra izany tsiro Lollipop rehetra izany aminay ohatrinona no tiantsika farafaharatsiny izay famolavolana. Ary raha te hanana traikefa feno ianao dia aza adino ny mividy ny kinova Pro miaraka amin'ireo endriny rehetra, izay ahitana ny rà mandriaka ato amin'ity app launcher ity. Fanehoam-pahefana ary inona no hatao amin'ny fampiharana tsara endrika sy feno endrika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Nova Launcher 4.0 dia misy ao amin'ny Play Store miaraka amin'ny fanavaozana tanteraka ny Material Design